HypeAuditor: Yako Influencer Kushambadzira Stack Ye Instagram, YouTube, TikTok, kana Twitch | Martech Zone
Kwemakore mashoma apfuura, ini ndakanyatso kumisikidza yangu yakabatana uye inokurudzira maitiro ekushambadzira. Ndiri kunyanya kusarudza mukushanda nemabrand - ndichivimbisa kuti mukurumbira wandakavaka haushoreke ndichiisa tarisiro nezviratidzo nemabatiro andingaite kubatsira. Vanokanganisa vanongokuchidzira nekuti vane vateereri vanovimba, vanoteerera, uye vanoita pane avo vakagovana nhau kana kurudziro. Kutanga kutengesa crap uye iwe ucharasikirwa nekuvimba kwevateereri vako. Vanorasikirwa nekuvimba kwavo uye hausisiri wekusimudzira!
Paunobvunzwa kuti ndevapi vanokurudzira vangade kuona mumakomba kubva kumabhureki:
59% yevanokurudzira vakati vangade kuona yakajeka pfungwa yemabhajeti aripo uye zvinotarisirwa kuendesa
61% yevanopesvedzera vanoda tsananguro yakajeka yechigadzirwa kana sevhisi inoshambadzirwa
Vanopfuura hafu (51%) vakakumbira ruzivo pane iyo kambani yavanenge vachienderana nayo
Ini ndinowanzo pusha makambani andinoshanda nawo ekuteedzera maratidziro uye ndinowanzo vhura nemuyedzo usingavabhadhare chero chinhu kunze kwekunge ichireva imwe chaiyo mari kune yavo yepazasi mutsetse. Nenzira iyoyo makambani andinoshanda nawo haanzwi sekunge ndiri kuvabvisa kana mushandirapamwe ukasazadzisa tarisiro. Saizvozvowo, havanzwe zvakashata nezvekucheka cheki kana ndikafambisa mutengi mutsva nenzira yavo. Kana iri kuwiriranwa pakati pevateereri, bhizinesi, uye neni nekuburitswa kuzere munzira ... hukama hwacho hunowanzotumbuka.
Izvo zvakati, mushandirapamwe mumwe kazhinji haufambise tsono. Kubudirira kwandakave nako makambani anonamira neni kwegore kana kupfuura kwandaigara ndichingovapa musoro kana kumwe kutarisisa. Ndosaka zvakakosha kuti mabrandi andinoshanda nawo ashandise yakakura yekushambadzira chikuva chekutarisa kufambira mberi kwehukama hwedu.
HypeAuditor inobatsira vamiririri, mabhureki, uye mapuratifomu kuvandudza kushanda kwemasimba avo ekushambadzira
HypeAuditor: Yako Kufuridzira Kushambadzira Stack
HypeAuditor inoteedzera vanopfuura mamirioni makumi maviri nematatu vanofuridzira, ine anopfuura makumi matatu nemashanu metric ye vetting, uye yakanakisa-mu-kirasi kubiridzira kuona system iyo inoshandisa AI. Ivo vanoongorora Instagram, YouTube, TikTok, uye Twitch uye vanopa data uye manzwiro ekubudirira mukushambadzira kwevanokurudzira. NaHypeAuditor, kambani yako inogona kuwana zvishandiso zvinotevera:
Tsvaga zvakanyatsoenderana Instagram, YouTube, uye TikTok influencers kune ese 12M + profiles uchishandisa seti yemafirita ayo anobatsira kugadzirisa runyorwa kumhando yepamusoro profiles.
Kupfuura makumi matatu neshanu-yakadzika metric yekuongorora Instagram, YouTube, TikTok & Twitch vanokurudzira. Nzvimbo yevateereri, zera-murume nemukadzi kupatsanurwa, chokwadi & kusvika, huwandu hwevateereri hwese.
Manage uye gadzirisa mushandirapamwe wako pamatanho ese kubva kune vanokurudzira mazita kune yekupedzisira mushumo mushandirapamwe. Chengetedza mushandirapamwe wako kubudirira uye gadziridza zvakafanira.
Ongorora mamiriro emakwikwi uye ongorora kushambadzira kwekushambadzira kwevanokwikwidza. Enzanisa akawanda mabrandari padivi nerutivi uye tsvaga yepamusoro misika vatambi mune imwe nyika uye niche.
HypeAuditor yakagadzira hunyanzvi hwehunyanzvi hunoita kuti indasitiri yekushambadzira iratidzike uye ive pachena. HypeAuditor chinangwa ndechekubatsira vashambadziri kuti vagadzire yakatanhamara uye inoshanda kukurudzira kushambadzira mishandirapamwe vachishandisa nzira inotungamirwa nedata.
Tanga neHypeAuditor Yemahara
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu HypeAuditor Affiliate batanidza mune ino chinyorwa.
Tags: tsvaga vanokurudziratsvaga instagram influencerstsvaga TikTok influencerstsvaga twitch influencerstsvaga YouTube vanokurudzirakubiridzira kuonakufurira kubiridzirakushambadzira kushambadzirainstagram influencerstiktok vanokurudziratwitch influencersyoutube influencers
RANT: Ndiani Muridzi Wako Domain?